ब्लग लेख्नका लागि कुनै समय सिमा हुँदैन:रचना उपाध्याय - MeroReport
ब्लग लेख्नका लागि कुनै समय सिमा हुँदैन:रचना उपाध्याय
आफुलाई यूवा महिलावादी भन्न रुचाउने रचना उपाध्यायलाई नेपाल घुम्ने रहर पनि छ । फुर्सद मिलेको समयमा यो रहर धेर थोर पुरा गर्दै आएकी रचना के एण्ड के कलेजकी अध्यापक पनि हुन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुमा ५ वर्षको अनुभव पनि संगालिसकेकी रचना सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । मेरो रिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै रचना उपाध्यायलाई प्रस्तुत गरेका छौ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
रचना उपाध्यायलाई अरुले कसरी चिन्ने बताइदिनुस न ।
म आफूलाई यूवा महिलावादी ब्यक्तिको रुपमा हेर्छु । लैंगिक अध्ययनमा स्नाकोत्तर गरेकी छु । र म के एण्ड के कलेजमा अध्यापक हुँ। साथै महिला अधिकार सम्बन्धि काम गर्ने संस्थाहरुमा स्वतन्त्र परामर्शदाता भएर पनि काम गर्दै आएको छु ।
मैले ब्लगिङ् पनि गर्छु भनेर मेरो साथी समूह भित्र मात्रै परिचित छु ।अलि नियमित रुपमा ब्लगिङ् गर्न सके भने चाहि ब्लगरको रुपमा नै परिचित हुन चाहन्छु ।
तपाँइले चलाउने ब्लग http://upadhyayarachana.wordpress.com/ मात्रै कि यसबाहेक अरु पनि छन्?
यो मात्रै चलाउँछु । यसमा म आफ्नो काठमाडौँमा बस्दा,काम गर्दा, हिंड्दा, डुल्दा आईपर्ने सबै खालका अनुभवको बारेमा लेख्छु । मेरो ब्लग मेरो र मेरो शहरको बारेमा हो जसमा मान्छे, यहाँको कला, संस्कृति, वास्तुकला, ट्राफिक जाम इत्यादि सबै समावेश हुन्छन्, त्यसैले यसको र्‍यान्डम म्यूजिङ् भनेको हुँ ।
२ वर्ष भयो तर भर्खरै आफ्नो ब्लग लेख्ने शैली र विषयवस्तु परिवर्तन गरेको छु ।
केका लागि ब्लगिङ् गर्नुहुन्छ?
मेरो ब्लगमा पनि मैले लेखेको छु कि एउटा ठुलै लेखक(western) को अन्तरबार्ता सुन्दा उनले ‘तेश्रो मुलुक’ भनेर हाम्रो जस्तो देशहरुलाई फोहोर ठाउँ भनेको सुनेर मैले आफ्नो ब्लग शुरु गरेको हूँ । मेरो ब्लगबाट काठमाडौँ फोहोर भएपनि सुन्दर शहर हो भन्ने सन्देश मलाई दिन मन छ । मैले ब्लग लेखनमा धेरै समय दिन सकेको छैन । कुनै कुराले मन छोयो भने चाहि लेखिहाल्छु ।
मानिसहरु ब्लगिङ् गर्न रहर त धेरै नै गर्छन तर निरन्तरता दिन सक्दैनन् । तपाईको विचारमा ब्लगलाइ समय दिन गाह्रो भएरै हो या अरु कुनै कारणले होला?
ब्लग लेख्नका लागि कुनै समय सिमा हुँदैन त्यसैले यो सजिलै तपाइको प्राथकिमताबाट हट्न सक्छ ।
ब्लगिङ् बाहेक तपाँइको अर्को रुचीको बिषय चाँही के हो?
पढ्ने, घुम्ने र फोटो खिच्ने ।
ब्लगिङ् गर्न कत्तिको सजिलो छ?
लेख्न मनपर्नेहरुलाई ब्लगिङ् पत्रकारिता भन्दा सजिलो नै हुन्छ । तर सबै भन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ नियमित लेखनका लागि चाहिने अनुशासन हो ।
अनि नेपाली ब्लगिङ्को प्रयोगलाइ कसरी हेरिरहनुभएको छ सदुपयोग या दुरुपयोग?
नेपालमा ब्लग प्राय पत्रकारिता, यात्रा संस्मरण र राजनितीक टिका टिप्पणीका बारेमा हुन्छ, जसलाई सदुपयोग नै भन्नु पर्छ । तर यतिमा मात्रै सिमित चाहिँ हुन नहुने जस्तो मलाई लाग्छ ।
मलाई अरुको ब्लग पढ्न असाध्यै मनपर्छ । म प्राय आफ्नो साथीहरुको ब्लग पढ्छु । त्यस बाहेक म बिशेषगरी नारीवाद, महिला अधिकार र यात्रा संस्मरणहरुको बारेमा लेखिएका ब्लगहरु पढ्छु ।
ब्लगिङ् वा ब्लगरका लागी आचारसंहिताको आवश्यकताको कुरापनि उठिरहेको हुन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ, जरुरी छ ब्लगरका लागी आचारसंहिता?
लेख र लेखन सीपबाट मानिसमा धेरै प्रभाव पर्न सकिन्छ ।अहिलेको समय जहाँ आतंकबाद, अश्लील सामाग्री जस्ता कार्यहरुका लागि ईन्टरनेटको प्रयोग भईरहेको छ । ब्लगका लागि पनि आचारसंहिता जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
मैले अहिले सम्म ब्लगमा अनुपयुक्त सामग्रीहरु भेट्टाएको छैन ।
त्यस्तो खासै केहि छैन ।
मैले धेरै ब्लग त फलो गरेको छैन तर मैले पढ्ने गरेका प्राय ब्लगहरुमा कुनै न कुनै रुपमा हाम्रो समाजको विवरण नै गरिएको हुन्छ । नेपाली समाजको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्षलाई गैर-राजनीतिक तवरमा प्रस्तुत गरेको मैले पाएको छु ।
ब्लगिङ्लाइ केहीले नागरिक पत्रकारिता पनि भन्ने गरेको पाइन्छ, के ब्लगिङ नागरिक पत्रकारिता नै हो त?
एक हिसाबले हो, यसलाई नागरिक पत्रकारिता भन्न मिल्छ तर ब्लग नितान्त ब्यक्तिगत अभिव्यक्ति गर्ने थलो पनि हो । यसका लेखहरुमा पत्रकारितामा हुनुपर्ने हुनु पर्ने निष्पक्षता नहुन पनि सक्छ ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा फेसबुक शहरी जीवन बिताउनेहरुका लागि अत्यावश्यक कुरा मध्ये एउटा भईरहेको र कतिपयको लागि भैसकेको छ । सबैले सबैखालका अनुभव चित्रसहित चर्चा गर्ने थलो जस्तो लाग्छ मलाई फेसबुक । ट्विटर र ब्लग चाहिँ एउटा समुहमा मात्रै सिमित छ । बौद्धिक र आफ्नो वरिपरी संसारमा भईरहेको गतिविधिमा चासो राख्ने जमातले धेरै ट्विटर र ब्लगको प्रयोग गर्छन ।हामी धेरै कुरामा पछाडी परे पनि सोसल मिडियामा धेरै अगाडि छौँ । सोसल मेडियाले सुचना जनमानसमा पुर्याउने काम गरेको छ र बिशेषगरी युवाहरुमा समसामयिक गतिविधि बारे चेतना वृद्दि गरेको मलाई लाग्छ ।
Comment by Prakash Lamichhane on October 30, 2014 at 3:25pm
Comment by Amuna Chapagain on October 28, 2014 at 4:24pm